चामलको गेडामा तीन देशको झण्डा ! - Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | १७ बैशाख २०७६, मंगलवार १३:३५ |
नारायण ढुङ्गाना, काठमाडौ – क्यान्भास, लोक्ता वा नेपाली कागजमा चित्रकला प्रसस्तै भइरहन्छ । दृश्यचित्र होस् या मुहार चित्र, थान्का वा पौभा चित्र ठूलाठूला आकारमा बनाउनु सामान्य हो र धेरै चित्रकारले यस्ता चित्र बनाइरहेका छन् ।
नेपाल र भारतको चित्रकला प्रदर्शनी भनिए पनि यहाँ एकजना बङ्गलादेशी चित्रकार खालिफा पलाश पनि सहभागी छन् । उनी नै हुन् चामलको गेडामा चित्र बनाएर प्रदर्शनीमै चर्चा कमाउने चित्रकार । उनको चित्रकला हेर्न सामान्य आँखाले भ्याउँदैन । आइ ग्लासको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
“साह्रै राम्रो लाग्यो, यति सानो चामलको गेडामा यसरी चित्र बनाउँदाको मेहनतलाई सम्मान गर्नुपर्छ,” चित्र अवलोकन गर्दै मनोविद् डा नरेन्द्र ठगुन्नाले भने। उनले एउटा चामलको गेडोमा तीन देशको झण्डा बनाएर आपसी सम्बन्धलाई देखाउन खोजेका छन् ।
नेपाल र भारत सिमाना जोडिए देश हुन्। सिमाना नजोडिएको देशमध्ये सबैभन्दा नजिक करीब २७ किलोमिटर दुरीमा रहेको बङ्गलादेश सम्बन्धका हिसाबले नजिक छ । “यी तीन देशको आपसी सम्बन्धलाई प्रगाढ छ भन्ने सन्देश दिन एउटै चामलको गेडोमा तीन देशको झण्डा समावेश गरेको हुँ,” चित्रकार पलाशले बताए।
चित्र हेर्नकै लागि आइग्लासको प्रयोग गर्नुपर्छ भने बनाउँदा कति गाह्रो भयो होला ? उनलाई चित्रकला हेर्न आएका दर्शकको पहिलो प्रश्न हुन्छ, “तपाईलाई चित्र बनाउन गाह्रो भएन ।” सहज रुपमा उत्तर आउँछ “अरु बनाएजस्तै सामान्य नै लाग्छ, दुई/तीन दिनमा एउटा चित्र बनाइन्छ ।”
सांस्कतिक विविधताले भरिपूर्ण नेपालसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गरी चित्रकलासम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल र भारतका चित्रकारको सहभागितामा ‘नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय चित्रकला’ प्रदर्शनी आयाजना गरिएको हो । त्यसमा बङ्गलादेशका चित्रकला समेत हेर्न पाउँदा नेपाली कलाकारले खुशी ब्यक्त गरे । राखिएका उनका सात चित्रमध्ये अर्को एउटा चामलको गेडोमा चर्चित साहित्यकार रञ्जना ठाकुर, शेक्सपियर र नजरुलको चित्र कोरिएको छ ।
अर्को एउटा गेडोमा भने नेपाली मौलिक पोशाकमा सजिएका एक पुरुषको चित्र छ । नेपालमा चित्रकला प्रदर्शनी हुन लागेकाले नेपालको प्रतिनिधित्व गराएको उनले बताए । सेड द लाइट पिस मेकरको आयोजना ‘इण्डो–नेपाल कला उत्सव’अन्तर्गत जारी प्रदर्शनीमा अर्का भारतीय चित्रकारले फ्याँकिएका वस्तुबाट बनाइएको मूर्तिकला समेत प्रदर्शनी गरेका छन् ।
भारतीय चित्रकार रितु सिंहले शिशुलाई काखमा लिएर खेलाउँदै गरेको आमाको माया चित्रले पनि दर्शकको मन तान्छ । योसँगै उनका तीन चित्र यहाँ प्रदर्शनीमा छ । कपालमा फूल सिउरिएकी झक्तपुरकी ६५ वर्षीया आमा घाम ताप्दै थिए । दुबै हातले गालामा समाएर आफ्नै धुनमा रहँदा वृद्धाको तस्वीरलाई नेपाली चित्रकार एनवी गुरुङले चित्रमा उतारेका छन् ।
“साहै्र सुन्दर लाग्यो,” चित्र अवलोकन गर्दै भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले भने । विभिन्न देशका चित्रकार सहभागी भएर गरिने यस्तो प्रदर्शनीले सांस्कृतिक सम्बन्ध, भाषिक एकतालाई जीवन्त बनाउने कलाकारले बताएका छन् ।
प्रदर्शनममा नेपाल र भारत कला, संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाज, जीवनशैली, फूल, वन, वन्यजन्तुसहित मुहार चित्र र कुमारीको चित्र समावेश छ । रासस
Previousस्थानीय तहलाई रिक्त पदपूर्तिका विवरण पठाउन निर्देशन
Nextभाइरल बनेपछि यी अष्ट्रेलियन क्रिकेटरले भने, ‘म समलिङ्गी होइन’
दाङबाट काठमाडौं जाँदै गरेको बस दासढुंगामा ट्रकसँग ठोक्किदाँ २८ जना घाइते
९ भाद्र २०७५, शनिबार ०९:५८
पानीमुनिको पुल : खाँबा हेर्दै नदीमा हेलिँदाको आधा दशक !
११ भाद्र २०७५, सोमबार १६:१५
नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर जागिर खाइरहेका १५ सय कर्मचारी अख्तियारको छानबिनमा
८ आश्विन २०७५, सोमबार ०८:११